The University of Rostock ma aha oo kaliya jaamacadda ugu da'da weyn ee gobolka badda bari; sidoo kale waa ugu qanisan dhaqan. Dabcan, mid ka mid ah heer sare ah ugu Jaamacadaha In Europe. Sida la aasaasay 1419, waxa ugu dhakhsaha badan dabbaal-degi doonaa sanad-guuradii 600aad. Waxay u ekaan doonaa dib u caado dheer waxbaridda ardayda oo samaynaya cilmi-baarista. The dhismayaasha Gothic-magacaabay, weheliyaan ilaha geed-jiidh iyo beeraha u samaysaa meel cajiib ah. Xarunta jaamacadda waa dhismaha ugu weyn ee il-qabad oo na soo jiitay markii hore in this ku daray in ay The Jaamacadaha cajiib ah Most. waa ku yaal ka soo horjeedka a baarkin iyo il, bar fiican ee ardayda iyo dadka soo booqda si ay xoogaa waqti ah ku qaataan maxfalka ah bannaanka qani ku ah dhismaha.
The University of Rostock waa mid ka mid ah jaamacadaha Jarmal kala duwan oo aad u balaadhan oo ah maadooyin. Waxay bixisaa in ka badan 100 koorsooyinka: 34 dhammee bachelor leh, 56 iyadoo shahaadada Masterka ee, 37 (ay ka mid yihiin macalimiinta) iyadoo imtixaan gobol laga qaadayo, iyo 3 la Ph.D a. Intaas waxaa sii dheer, xarunta tababarka macalinka iyo Waxbarasho Cilmi baaristu kaliya ma sameyso cilmi baaris waxbarasho ee waxay sidoo kale ka shaqeysaa hagaajinta tayada tababarka macalinka.
Ma doonaysaa in aad ogaato sida loo helo mid ka mid ah Jaamacadaha cajiib In Europe intooda badan? Hadba jihada aad tahay safraya ka (e.g. Rostock ama Schwerin, Berlin ama Hamburg), tareenka ilaa aad ka gaarto boosteejada tareenka Wismar. Laga soo bilaabo halkan, aad awoodid qaadi bas u-joogsiga baska ee J.-R.-Beker-Strasse adigoo isticmaalaya khadadka 4 ama G (dhinaca Ostseeblick) ama B-D (dhinaca Seebad Wendorf). Kaliya waa hal daqiiqo oo lug ah boosteejadan istaagga basaska oo dhan baabuur park si Campus ah.
Jaamacadda Aarhus waxa uu ku yaalaa magaalada labaad ee ugu wayn dalka (Aarhus sidoo kale waa magaca magaalada) waxaana lagu gartaa xarunteeda cagaaran, complete leh gudubno, a. Jaamacadda waa tusaale kaamil ah sida dhismayaasha nin-dhigay iyo deegaanka dabiiciga ah shaqayn karaa wada noolaanshaha kaamil ah. Muujiyey dhismaha ugu weyn ee, dhammaataan. Qaar badan oo ka mid ah dhismayaasha ayaa loogu talagalay by dhise Danish C.F. Moller in design a casri ka turjumaya dhalinta ee jaamacadda. Moller iyo la-hawlgalayaasheeda uu Kay Fisker iyo Povl Stegmann ay mas'uul ka ahaayeen dhismaha huruud ah-leben. Iyagu waa mid gaar ah iyo sidoo kale kala jaamacadda. dhismaha ugu weyn ayaa tan iyo markii loo arkaa mid ka mid ah 12 ugu shuqullada naqshadda muhiim ah in taariikhda Danmark. Mid ka mid ah sababo badan waa mid ka mid ah ugu Jaamacadaha cajiib ah.
Iyadoo in ka badan 44,000 ardayda, Jaamacadda Aarhus waa jaamacadda labaad ee ugu weyn dalka. Waxay ka kooban tahay afar kuliyadood oo ah Farshaxanka, Sayniska iyo Technology, Caafimaadka, iyo Ganacsiga iyo Social Sciences.
adduunka wajahan, Jaamacadda waxay leedahay barnaamijyo sarrifka meel ka badan 50 hay'adaha caalamka oo dhan. Tan waxaa ka mid ah University of Arctic, Network Utrecht ee, Xarunta Waqooyiga Yurub ee Fudan, iyo Nordic Center India.
Aarhus been at mid ka mid ah isgoosyada tareenka ugu muhiimsan ee Denmark. Waxaa jira tageen saacadoodba ilaa xagga woqooyi, Koonfur, iyo galbeed. From Koonfurta iyo Bartamaha Europe, xidhiidhada waa via Hamburg / Flensburg. Waqtiga safarka ka soo Hamburg in Aarhus waa qiyaastii shan saacadood. From dalalka yurubta bari tababar xidhiidh la Aarhus tago via Poland iyo Copenhagen. Aarhus ayaa adeegyada saacadeed iyo ka Copenhagen. Furitaanka Tunnel ah hoos Great ayaa gaabisay, safarka by hal saac. safarka hadda qaadataa ilaa seddex saacadood iyo badh. Waxaa jira dhowr xiriir maalin kasta si Sweden, Germany, iyo inta kale ee Europe.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Inta badan cajiib ah Jaamacadaha The In Europe” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspectacular-universities-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#jaamacadda #waxbarasho #jaamacadaha #jaamacad europetravel